महिलाको यौन इच्छा देखाउने ब्यवहार यसरी थाहा हुन्छ – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७८ जेष्ठ ९, आईतवार २३:३३
विश्वभर नै एउटा मान्यता छ । नारीलाई बुझ्न कठिन हुन्छ । महिलाहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् ।
पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौनिक चाहना पनि शब्दमै ब्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । यहाँ महिलाले यौन सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहारको चर्चा गरिएको छ ।
५ यदि तपाइँसँग रहेकी स्त्रीले तपाइँलाई अंगाली रहेको समयमा आफ्नै शरीर गह्रौं भएको जस्तो गरी कम्मर वा अन्यत्र हात राख्छिन् भने बुझ्नुस् उनलाई तपाइँसँग संसर्ग गर्न मन छ । अझ स्त्रीले तपाइँको ओच्छ्यानमा बसेर ‘कस्तो नरम ओच्छ्यान’ वा त्यसमा पल्टिने जस्ता ब्यवहार गर्न थालिन् भने कुरा बुझ्नुस् उनी के चाहन्छिन् ।
श्रीमानले सहवासका बेला ओठ, जिब्रो तथा शरिरका विभिन्न भागमा किन चुम्बन गर्नुहुन्छ ?
२०७६ कार्तिक ४, सोमबार १९:३१
सावधान ! मध्यरातमा भुलेर पनि नगर्नुस् सेक्स, यस्तो हानी गर्छ
२०७६ आश्विन २५, शनिबार १८:३४
कुन राशिका ब्यक्तिलाई के लाभ हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल
२०७८ जेष्ठ १८, मंगलवार ०३:०१